Xirayaasha Birta ahama waa kuwa aan lagama maarmaanka u aheyn Maraakiibta Maraakiibta
Markabka saaran markab shixnado ah, dhammaantoodna waxa ku jira noocyo kala duwan oo qalab ah, sidaa darteed ku habboon bad-qabka badbaadada. Qalabka badan ee markabka, oo ay ku jiraan birta biraha ah ee birta ah ee birta ah, inkasta oo ay jiraan qalab yar oo yar, ayaa ah badqabka markabka qaybo muhiim u ah safarka. Maxay tahay sababta loo leeyahay muhiimada ...
Maxay Yihiin Qeexitaanka Neefta Birta ee Birta ah Waa Maxay Farqiga U Dhexeeya Boorsooyinka Balaastikada Ah Iyo Buufinta Caaga?
1.with daaha balaastigga ah (PVC) majiro wax saameyn ah oo olol leh oo kahortaga qiiqa dabka, kahortaga deegaanka 2.PVC heerkulka daahan ama jawiga iftiinka nolosha oo gaagaaban maqaarka qalalan 3.unit qiimahiisu waa ka sareeyaa faashadda (wax). 2 jeer Caaga lagu buufinayo buufiska xanuunka madow ...
Isticmaal Iyo Isticmaalka Batoonka Birta ahama
Xarkaha birta ahama, sidoo kale waxaa loogu yeeri karaa xirmada birta ahaanta ama xajinta birta, birta loo isticmaalo in lagu kaashado suunka birta ah ee walxaha leh, leh xoog siligga sare, adeegsiga ballaaran, rakibidda waa sugitaan fudud oo astaamo ah, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa calaamadaha taraafikada, isgaarsiinta ...
Codsiga Taabashada Birta ahama
Xarkaha siligga biraha ah (dibbling) waxaa loo isticmaali karaa gudaha iyo dibedda. Marka loo eego goobta isticmaalka, si fudud ayaa loo xidhi karaa oo si fudud ayaa gacanta loogu rakibi karaa. Gabowga, ladagaalanka ladagaalanka, raajada ultraviolet, cidhiidhi. Faahfaahin buuxda. Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa isgaarsiinta, ...
Korontada Waxay leedahay codsiyo badan oo kaladuwan oo ku saabsan awooda korontada iyo nidaamyada quwada korontada. Faa'iidooyinkeeda waxaa lagu muujiyey: 1. Alaabada biraha xarkaha biraha aan xaddidneyn laguma xaddideynin qaabka iyo cabirka shayga la xirayo; 2. Qaabdhismeedka suun fudud ayaa fududeynaya kakanaanta dhaqanka ...